Translation contests | English to Somali | 56 | ProZ.com
Bon voyage: "Stories about travel" » English to Somali
Xilligaan, markii 50 sano ka hor, Neil Armstrong uu cagtiisa ku dul jiiday dusha Dayaxa ayaa dhiirrigelisay cabsi, isla weyni iyo layaab adduunka. Wargeyskan ayaa ku dooday in “nin, laga bilaabo maanta, uu aadi karo meel kasta oo adduunka ka mid ah maskaxdiisa ayaa doonaysa, xariifnimadiisa ayaa ku aaddan… meerayaasha, si dhakhso badan, waqti dambe, ninku waa hubaal inuu aado.” Laakiin maya. Soo caga dhigashada Dayaxu waxa uu ahaa aflagaaddo, yool la gaadhay ma aha dhammaad ahaantiisa laakiin waa dariiqa lagu muujiyo awoodaha aan caadiga ahayn ee Mareykanka. Fartaas, mar haddii la sameeyay, looma baahna dib-u-dhigis. Kaliya 571 qofood ayaa soo galay; ilaa iyo 1972 qofna kama uusan sii fogaan meelaha bannaan marka loo eego Des Moines oo ka socota Chicago.
50ka sano ee soo socota waxay umuuqdaan kuwo aad u kala duwan. Qiimaha dhicitaanka, tikniyoolajiyada cusub, himilooyinka Shiinaha iyo Hindida, iyo jiil cusub oo ganacsato ah ayaa ballan qaadaya marxalad geesinimo leh oo ku saabsan horumarinta booska. Waxay runtii ku lug yeelan doontaa dalxiis ee shabakadaha isgaarsiinta hodanka ah iyo tan ugu fiican ee dhammaan; mustaqbalka fog waxay ku lug yeelan kartaa dhiig-miirashada macdanta iyo xitaa gaadiid badan. Boosku waxay weligood noqon doonaan sidii dhul ballaadhsiineed - garoon ay ku shaqeeyaan shirkadaha iyo shakhsiyaadka khaaska ah, oo aan ahayn dawladaha kaliya. Laakiin si loo ballanqaado in dunidan loo baahan yahay dunidu waxay u baahan tahay inay abuurto nidaam sharci ah oo lagu xukumaa samooyinka - ha ahaato waqtigaas iyo ha ahaato, dagaal ha ahaadee.
Horumarka booska ilaa hada waxaa diirada lagu saaray fududeynta howlaha hoose - inta badan isgaarsiinta dayax gacmeedyada si loo baahiyo. Hadda laba arrimood ayaa is beddelaya. Marka hore, juquraafi ahaan waxa ay curyaamineysaa cadaadis cusub oo ay ugu direyso aadanaha meel ka durugsan dhulka hoose ee dhulka hoose. Shiinaha ayaa qorsheynaya inuu dhulka ku soo dejiyo Dayax marka la gaaro 2035. Maamulka madaxweyne Donald Trump wuxuu doonayaa in dadka Mareykanka ay ku soo laabtaan halkaas marka la gaaro 2024. Kharashaadka dhicitaanka ayaa tani ka dhigaya mid ka awood badan sidii markii hore. Apollo waxay ku kacday boqolaal milyan oo doolar (lacagta maanta ku jirta). Hadda tobanaan balaayiin waa qiimaha tikidhada.
Waa khalad in kor loo qaado meelaad sidii loo jeclaa ee loo yaqaan 'West West', oo ah xasilooni darro baahsan halkaas oo bina-aadamku ku tuuri karo meerteeda oo dib uga soo ceshan karto masiirkeeda. Meel bannaan si loo fuliyo ballanqaadkiisii xukunka ayaa loo baahan yahay. Waqti uusan dunidu ku heshiin karin shuruucda ganacsiga dhulka ee baararka birta iyo soybeanska oo u ekaan kara weydiin weyn. Laakiin iyada oo aan lahayn wax kasta oo ka baxsan dhulka ayaa si fiican u sugi doona 50 sano oo kale si loo oofiyo. Meelaha ugu xun ayaa lagu dari karaa dhibaatooyinka Dunida
Entry #27575 — Variant: Maxaa Tirimaxasom
Xilligaan, markii 50 sano ka hor, Neil Armstrong uu cagtiisa ku dul jiiday dusha Dayaxa ayaa dhiirrigelisay cabsi, isla weyni iyo layaab adduunka. Wargeysku wuxuu ku dooday in “nin, laga bilaabo maanta, uu aadi karo meel kasta oo adduunka oo dhan maskaxdiisu doonayso, iyo xariifnimadiisa
meerayaasha, sida ugu dhakhsaha badan dambe, ninku waa hubaal inuu tagayo. Laakiin maya. Soo caga dhigashada Dayaxu waxa uu ahaa aflagaaddo, yool la higsaday maaha dhammaadkiisa laakiin waa dariiqa lagu muujiyo awoodaha aan caadiga ahayn ee Mareykanka. Fartaas, mar haddii la sameeyay, looma baahna dib-u-dhigis. Kaliya 571 qofood ayaa soo galay; ilaa iyo 1972 qofna kama uusan sii fogaan meelaha bannaan marka loo eego Des Moines oo ka socota Chicago.
Waa khalad in kor loo qaado meelaad sidii loo jeclaa ee loo yaqaan 'West West', oo ah xasilooni-darro baahsan halkaas oo bina-aadamku ku tuuri karo meerteeda oo dib uga soo ceshan karto masiirkeeda. Meel bannaan si loo fuliyo ballanqaadkiisii ​​xukunka ayaa loo baahan yahay. Waqti uusan dunidu ku heshiin karin shuruucda ganacsiga dhulka ee baararka birta iyo soybeanska oo u ekaan kara weydiin weyn. Laakiin iyada oo aan lahayn wax kasta oo ka baxsan dhulka ayaa si fiican u sugi doona 50 sano oo kale si loo oofiyo. Meelaha ugu xun ayaa lagu dari karaa dhibaatooyinka Dunida
Entry #27451 — Variant: Maxaa Tirimaxasom
Daqiiqad markii, 50 sano ka hor, Neil Armstrong uu cagtiisa ku dul jiiday dusha Dayaxa ayaa dhiirrigelisay cabsi, isla weyni iyo layaab adduunka.Wargeyskan ayaa ku dooday in “nin, laga bilaabo maanta, uu aadi karo meel kasta oo adduunka ka mid ah maskaxdiisa ayaa doonaysa, xariifnimadiisa ayaa ku aaddan… meerayaasha, si dhakhso badan, waqti dambe, ninku waa hubaal inuu aado.” Laakiin maya. Soo caga dhigashada Dayaxu waxa uu ahaa aflagaaddo, yool la gaadhay ma aha dhammaad ahaantiisa laakiin waa dariiqa lagu muujiyo awoodaha aan caadiga ahayn ee Mareykanka. Fartaas, mar haddii la sameeyay, uma baahnin wax kabitaan ah. Kaliya 571 qofood ayaa soo galay; ilaa iyo 1972 qofna kama uusan sii fogaan meelaha bannaan marka loo eego Des Moines oo ka socota Chicago.
50ka sano ee soo socota waxay umuuqdaan kuwo aad u kala duwan. Qiimaha dhicitaanka, tikniyoolajiyada cusub, himilooyinka Shiinaha iyo Hindida, iyo jiil cusub oo ganacsato ah ayaa ballan qaadaya marxalad geesinimo leh oo ku saabsan horumarinta booska. Waxay runtii ku lug yeelan doontaa dalxiis ee shabakadaha isgaarsiinta hodanka ah iyo kuwa ka fiican ee dhammaanba; mustaqbalka fog waxay ku lug yeelan kartaa dhiig-miirashada macdanta iyo xitaa gaadiid tiro badan. Boosku waxay weligood noqon doonaan sidii dhul ballaadhsiineed - garoon ay ku shaqeeyaan shirkadaha iyo shakhsiyaadka khaaska ah, oo aan ahayn dawladaha. Laakiin si loo oofiyo ballanqaadkan adduunku wuxuu u baahan yahay inuu abuuro nidaam sharci ah oo lagu xukumayo samooyinka - ha ahaato waqtiga nabadaba iyo hadday tahayba, dagaal ha ahaadee.
Waa khalad in kor loo qaado meelaad sidii loo jeclaa ee loo yaqaan 'West West', oo ah xasilooni-darro baahsan halkaas oo bini-aadamku ku tuurayo silsiladiisa oo dib uga soo ceshan karo aayaheeda. Meel bannaan si loo fuliyo ballanqaadkiisii ​​xukunka ayaa loo baahan yahay. Waqti uusan dunidu ku heshiin karin shuruucda ganacsiga dhulka ee baararka birta iyo soybeanska oo u ekaan kara weydiin weyn. Laakiin iyada la'aanteed, awoodda wax walba oo ka baxsan Dhulka ayaa si fiican u sugi doonta 50 sano oo kale si loo oofiyo. Meelaha ugu xun ayaa lagu dari karaa dhibaatooyinka Dunida.
Entry #27398 — Variant: Not specifiednone
Xilligaan, markii 50 sano ka hor, Neil Armstrong uu cagtiisa ku dul jiiday dusha Dayaxa ayaa dhiirrigelisay cabsi, isla weyni iyo layaab adduunka. Wargeyskan ayaa ku dooday in “nin, laga bilaabo maanta, uu aadi karo meel kasta oo adduunka oo dhan niyadiisa doonayso, iyo xariifnimadiisa ayaa ku wareegeysa meerayaasha, si dhakhso badan, waqti dambe, bini aadamku waa hubaal inay aadan.” Laakiin maya. Soo caga dhigashada Dayaxu waxa uu ahaa aflagaaddo, hadaf la gaadhey ma'aha dhammaadka laftiisa laakiin waa dariiqa lagu tilmaamo awoodaha aan caadiga ahayn ee Mareykanka. Fikradaas, mar haddii la sameeyay, uma baahnin wax kabitaan ah. Kaliya 571 qofood ayaa soo galay orbitka; Ilaa iyo 1972 qofna kama uusan sii fogaan meelaha bannaan marka loo eego Des Moines oo ka socota Chicago.
50ka sano ee soo socota waxay umuuqdaan kuwo aad u kala duwan. Qiimaha dhicitaanka, tikniyoolajiyada cusub, himilooyinka Shiinaha iyo Hindida, iyo jiil cusub oo ganacsato ah ayaa ballan qaadaya marxalad geesinimo leh oo ku saabsan horumarinta booska. Waxay runtii ku lug yeelan doontaa dalxiis ee shabakadaha isgaarsiinta hodanka ah iyo kuwa ka fiican ee dhammaanba; Mustaqbalka fog waxay ku lug yeelan kartaa dhiig-miirashada macdanta iyo xitaa gaadiid badan. Xawaaraha wuxuu weligiis noqon doonaa sidii loo ballaarin lahaa Dunida - garoon ay ku shaqeeyaan shirkadaha iyo shakhsiyaadka khaaska ah, ma'ahan dowladaha kaliya. Laakiin si balankan loo oofiyo dunidu waxay u baahan tahay inay abuurto nidaam sharci ah oo lagu xukumaa samooyinka - ha ahaato waqtigaas iyo ha ahaato, dagaal ha ahaadee.
Horumarka booska ilaa hada waxaa diirada lagu saaray fududeynta waxqabadka hoose - inta badan isgaarsiinta dayax gacmeedyada si loo baahiyo. Hadda laba arrimood ayaa is beddelaya. Marka hore, juquraafi ahaan waxa ay curyaamineysaa cadaadis cusub oo ay ugu direyso aadanaha meel ka durugsan dhulka hoose ee orbitka. Shiinaha ayaa qorsheynaya inuu ku dego dadka Dayax sanadka 2035. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa doonaya in dadka Mareykanka ay ku soo laabtaan halkaas sannadka 2024. Qiimaha dhicista ayaa ka dhigaya muujintaan mid ka sii awood badan sidii markii hore. Apollo waxay ku kacday boqolaal milyan oo doolar (oo lacagta maanta ah). Hadda tobanaan balaayiin waa qiimaha tikidhada.
Waa khalad in kor loo qaado meelaad sidii loo jeclaa ee loo yaqaan 'duur joogta galbeed', oo ah xasilooni darro baahsan halkaas oo bina-aadamku ku tuuri karo meerteeda oo dib uga soo ceshan karto aayaheeda. Meel bannaan si loo fuliyo ballanqaadkiisii xukunka ayaa loo baahan yahay. Waqti uusan dunidu ku heshiin karin shuruucda ganacsiga dhulka ee baararka birta iyo soybeanska oo u ekaan kara weydiin weyn. Laakiin iyada oo aan lahayn wax kasta oo ka baxsan dhulka ayaa si fiican u sugi doona 50 sano oo kale si loo oofiyo. Meelaha ugu xun ayaa lagu dari karaa dhibaatooyinka dulka.
Entry #27983 — Variant: Not specifiednone
Daqiiqad markii, 50 sano ka hor, Neil Armstrong uu cagtiisa ku dul jiiday dusha Dayaxa ayaa dhiirrigelisay cabsi, isla weyni iyo layaab adduunka. Wargeyskan ayaa ku dooday in “nin, laga bilaabo maanta, uu aadi karo meel kasta oo adduunka ka mid ah maskaxdiisa ayaa doonaysa, xariifnimadiisa ayaa ku aaddan… meerayaasha, si dhakhso badan, waqti dambe, ninku waa hubaal inuu aado.” Laakiin maya. Soo caga dhigashada Dayaxu waxa uu ahaa aflagaaddo, yool la gaadhay ma aha dhammaad ahaantiisa laakiin waa dariiqa lagu muujiyo awoodaha aan caadiga ahayn ee Mareykanka. Fartaas, mar haddii la sameeyay, uma baahnin wax kabitaan ah. Kaliya 571 qofood ayaa soo galay; ilaa iyo 1972 qofna kama uusan sii fogaan meelaha bannaan marka loo eego Des Moines oo ka socota Chicago.
50ka sano ee soo socota waxay umuuqdaan kuwo aad u kala duwan. Qiimaha dhicitaanka, tikniyoolajiyada cusub, himilooyinka Shiinaha iyo Hindida, iyo jiil cusub oo ganacsato ah ayaa ballan qaadaya marxalad geesinimo leh oo ku saabsan horumarinta booska. Waxay runtii ku lug yeelan doontaa dalxiis ee shabakadaha isgaarsiinta hodanka ah iyo kuwa ka fiican ee dhammaanba; mustaqbalka fog waxay ku lug yeelan kartaa dhiig-miirashada macdanta iyo xitaa gaadiid tiro badan. Boosku waxay weligood noqon doonaan sidii dhul ballaadhsiineed - garoon ay ku shaqeeyaan shirkadaha iyo shakhsiyaadka khaaska ah, oo aan ahayn dawladaha. Laakiin si loo oofiyo ballanqaadkan adduunku wuxuu u baahan yahay inuu abuuro nidaam sharci ah oo lagu xukumayo samooyinka - ha ahaato waqtiga labadaba iyo hadday tahayba, dagaal ha ahaadee.
Entry #27380 — Variant: Not specifiednone